ABOn TOKKO MALEE LAMA MITI. – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooABOn TOKKO MALEE LAMA MITI.
ABOn TOKKO MALEE LAMA MITI.
Qixxeessaa Lammii | Waxabajjii 07, 2018
Dhaabni tokkichi qabsoo saba Oromoo faffaca’a irraa bakka tokkotti deebisee waal tessee hoogganaa jiru tokkicha. Dhaabileen isa duraa fi isa booda dhalatan hundi dhaaba kana gargaaruu malan malee hojii isaa gufachiisuu hin malle. Dhaabni kun bara bu’uureffama irraa qabee gufuulee alaa fi keessaa hedduu mudachaa bahe. Dhuguu irratti hundaa’ee sababa dhaabbateef gufuulee cufaa irra tarkaanfatee kunoo hara’a gahee jira. Dhugaan ni qal’atti malee hin cittu kan jedhamu kanuma. Ummatni Oromoo dhaabni inni akka qarayyoo ija isaatti eeggatu ABO akka ta’e diinaa fi firrillee akka gaaritti beeku. Dubbiin hamtuun garuu miseensotaa fi hoogganoota dhaaba kanaa warri turan har’aan tana sababa jijjirama yeroo biyyattii keessatti mul’ate kana irraa ka’uudhaan kabajaa isaa gadi buusuuf akka murna gosaa fi naannootti of ijaaranii maqaa isaa moggaafatanii ceehuu eegaluu isaaniiti.
ABO ummatni Oromoo tokkotti beeku bakka lamaa fi sadihitti hiranii maqaa isaan ceehuun maal akka isaan jechisiisu osoo beekanii duruma irraahuu waan kana keessa hin seenan ture. Jibbansi dhuunfaa fi mufiin murnaan qabsoo Oromoo guffachiisuu hin malle. Yeroo ummatni abbaan qabsichaa tokko ta’ee humna tokkoon jabaatee qabsoo isaa geggeessaa jiru kanatti ani ABO TOKKOOME, ANI ABO GALAASAATI FI SHANEETI jechuun ceehuun gaarii miti. ABOn dhugaa isa ganamaa kan obboo Dawid Ibsaan taligamu akka ta’e ummatni Oromoo akka gaaritti beeka. Akka haafa mukaatti dhaaba kana irraa warri harca’anii akka dhaaba hundeetti of waamuu barbaadan hundi haa qaanfatan. Dhugaa gadi dhiisanii dhara dhugaa fakkaatu qabatanii ummata jeequun seenaa fi seeraanillee akka isaan gaafachiisu dagachuu hin qaban.
Ummatni Oromoo murnoota dhaaba ganamaa irraa akka baala mukaatti sababoota gara garaa irraa ka’anii har’can dhaaba dhugaa seehanii akka hin dogongorre hubachiisuu fedha. ABOn kan ummata bal’aa Oromooti malee kan namoota dhuunfaa miti. Karaan tokkicha qofatu jira. Dhaaba kana irraa garaa murachuu warri dadhaban cufti maqaa isaaniin hin malle baatanii ceehuu dhiisanii garuma dhaaba isa hundee kan Obboo Dawid Ibsaan durfamutti osoo deebi’anii irra tola. Dhaaba ummata bal’aa maqaa jibbansa namoota dhuunfaa irraa qabaniif jecha dura dhaabbachuuf soqolatanii gara biyyaatti batattisuun qaanyii dandama hin qabne keessa of buusuudha.
Karaa qajeelaa bakka barbaadan nama geessu osoo argan irraa goranii karaa bakka inni itti nama geessu hin beekne qabatanii fiiguun gaarii miti. Hinaaffaa fi jibbansi dhalli Oromoo waliif qabu kan diina irraa qaban irraa olitti ilaalamuu hin qabu. Nama homaa harkaa hin qabne kan waa hin jirre wal irraa argachu barbaadu ta’uun gowwummaadha. Dhaabileen Oromoo maqaa ABO hin ta’in moggaafatanii deeman rakkoo hin qaban. Ummata Oromoof faaydaa qabaachuu fi dhiisuu ummata Oromoottu keesaa filata. Maqaa wal fakkaatu waan hin qabneef filmaata sabichaafis wal dhahiinsa hin qabaatan. Warri dhaaba tokkicha kana kasa kasaa qabatanii gara garaan fiiguu barbaadan murni Obboo Galaasaa fi Abbaa Nagayaa gocha ummata Oromoo afanfaajjeessu kana irraa of qusachuun barbaachisaadha.
Karaan irra deemanii fi bakka itti deeman tokko hamma ta’etti walitti mufiin jiraatus galma araaraa ummata bal’aa bira hamma gahanii walumaan deemuun furmaata filmaata hin qabne. Eenyu hooggana dhugaa, eenyu haaggana dharaa akka ta’e dhugaatu gaafa bakka gahame sanatti adda nama baasa. Akka dhuunfaattis ta’ee gareetti maqaa dhaaba kanaan ummata keessatti deebi’uuf uttaaluun gufuu QBO hiddaan buqqaase kana deebisanii ummata irratti xiribbuu ta’a. Dhaabni obboo Leencoo Lataan durfamu kunoo biyyatti galee OPDOtti ifaan ifatti harka kennatee jira. Dura bu’aan OPDOs ayyaana gooftota isaa irratti akka isaan bilisoomse itti himee jira. Karaan warra itti aananii haal duree tokko malee harka kennachuuf qophii irra jiraachuu labsiin beeksifatanis kanaan ala hin ta’u. Sirna mootummaa TPLF jalatti mirgi argamu akka hin jirre beekkamaadha. Sirna impayera Itophiyaa hundeen qaarsan malee nageenyi biyya tana keessatti ni bu’a jedhee yaadamu hin jiru.
Dhaabbileen Oromoo dhala Oromoon ijaaramanii fi sabaaf falmatan hundi karaa Minilik baase irra qabatanii burraaquun mana galma Oromoo osoo hin taane galma Tedroositti akka isaan geessu beekuu qabu. Alabaa Minilik qabatanii waajjira Minilki seenanii kursii isaa irra taa’uun ummata Oromoof wayuu miti. Oromoo fi Oromiyaan of danda’uu qofatu firii qabsoo bara dheeraa ta’a. Bu’aalee bubuutuuf jecha warri dunuufatanii gara biyyaatti of darbuuf uttaalaa jiran galgalli isaanii akka hin tolle dursanii hubachuu isaan barbaachisa.
ABO, WBO, QBO fi ummata Oromoo walii gala waliin qabsoo qindeeffatee dhaabni hin sochoone qelee bahee qiletti gala malee ummata Oromoo dukkana jalaa ifatti baasee abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuu hin danda’u. Walii galatti jamaan miseensa ABO dur turan hundi karaan isaanii fi ummata isaanii baasulee tokkicha ganamaa sana qofa akka ta’e osoo beekan irraa maquun cubbuudha. Karaa sirrii irratti deebi’anii ummata isaaniif waan danda’an gochuun hayyummaa fi gootummaadha. Kanaaf yaada kiyya kana akka fudhatan abdiin qaba.
Wayyaaneen tokko buutee tokko bakka buute, malee goomittan tokko hin jirtuu waliif birmadhaa! ========= “Hidhaan…
WBOn shiftaa miti Qabsaawota Haqaati malee, Jedhu Poolisiin Okkora Bittinneessaa Oromiyaa
WBOn shiftaa miti Qabsaawota Haqaati malee, Jedhu Poolisiin Okkora Bittinneessaa Oromiyaa #Miseensota Poolisii Okkora Bittinneessaa Oromiyaa Sabboonummaa…
ABOn jaarmiyaa qabsoo ummatni Oromoo wareegama guddaa itti baasee dha. Guraandhala 17, 2021 Geneti Deressa …
SAGALEE QEERROO BILISUMMAA OROMOO, Waxabajjii 07 ,2018